Posts tagged jMyanmar
phyo, Jun 12, 2014
ရန်ကုန်​မိုး နှင့် ကား ပိတ်​ဆို့ မှု​ကို မ​ကျေနပ်​တာ​လား??? ။ မိုးရွာလို့မိုးရေ​ချိုး​တာ​များ အဆန်း လုပ်​လို. . . . . . . ။
တိုက်​နံရံ ပေါ်​မှ အငှား​ကား ၁ စင်း ခုန်​ဆင်း လာ​တာ​လို့​ထင်​ရ​ပေ​မယ့် အမှန်​တကယ် က Iran မှ Street အနု​ပညာ​ရှင် Mehdi Ghadyanloo ရဲ့​လက်ရာ ပျံ​သန်း​နေ​သော​မြို.တော်​ကြီး​ပါ။ အီ​ရန် မြို့တော် တ​ဟီ​ရန် အခြေ​စိုက် Mehdi Ghadyanloo သူ့​လုပ်ဖော် များ ရဲ့ ရင်​သပ်​ရှု​မော ဖွယ် လက်ရာ​များ​ပါ။
ခရီး​ဆောင် သေတ္တာ ဆိုင်​ကယ်
တရုတ် တီထွင် ပညာ​ရှင် He Liangcai ရဲ. စိတ်ဝင်စား ဖွယ်​တီထွင်​မှု​ပါ။ ဖတ်ခနဲ ကြည့်​လျင် ခရီး​ဆောင် သေတ္တာ ပေ​မယ့် အမှန် တကယ် က အမြန်​နှုန်း ၂​၀ ကီ​လို​မီ​တာ ၊ လျှပ်စစ်​ဓတ် အား အပြည့် ဆို ၅​၀ ကီ​လို​မီ​တာ အထိ​မောင်း​နှင်​နိုင်​သော ၊ GPS Function ပါဝင်​သော လျှပ်စစ် ဆိုင်​ကယ် ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​တီထွင်​မှု ကို He Liangcai ဟာ ၁​၀​နှစ်​ကြာ​အချိန်​ယူ တီထွင်​ခဲ့​တာ​ပါ။
Hammock Cafe (မ​ဟိ​က​မ​နို)
အထက်​ပါ ပုံ​ကတော့ ဂျပန်​နိုင်ငံ တို​ကျို​မြို့ Kichijōji မှာ​ရှိ​သော Hammock Cafe (မ​ဟိ​က​မ​နို)　ပါ။ Hammock ဆို​တာ က​ေ​တာ့ ပုံ​ပါ​အတိုင်း ကမ်းခြေ​များ​မှာ မြင်​လေ့​မြင်​ထ ရှိ​တဲ့ Easy Hanging Bed ကို ခေါ် တာ​ဖြစ် ပါ​တယ်။ Hammock Cafe ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆိုင်​အတွင်း​မှာ ထိုင်​ခုံ​များ​နေရာ​မှာ Hammock Bed များ​ကို အသုံးပြု​ထား​တာ​ပါ။ ကိုယ်တွေ့သွား​ရောက် မြည်းစမ်း ကြည့်​လို​သူ​များ အတွက် mahikamano Written by Phyo Phyo
eCool နဲ. Eco ကြ​ရအောင်
ဖူ​ဂျီ​တောင်​ကြီး​တည်​ရှိ​ရာ ဂျပန်​ပြည်​ကြီး မှာ မ​ကြာ​ခင် နွေရာသီ​ကို ရောက်​ရှိ​တော့​မှာ​ပါ။ ရာသီ​ဥတု​ပူပြင်း​လာ​တာ​နဲ့ အမျှ ဘီ​ယာ​အေးအေး​လေး​ကို တောင့်တ​သော အာသာ​တ​ဆန္ဒ များ​လဲ ပို​လာ​တော့​တာ​ပေါ. ။ လုပ်​ရိုး​လုပ်​စဥ်​အတိုင်း ဘီ​ယာ ကို ရေခဲ​သေတ္တာ​ထဲ ထည့်​အအေး​မ​ခံ​ဘဲ 『eCool』ကို သုံး​ပြီး​တော့ မြေကြီး​ထဲ​မှာ အအေး​ခံ​ကြည့် ကြ​ရအောင် ။ မြေကြီး ကို ၃​၀​စင်​တီ​မီ​တာ ပတ်​ခြာ​လည် အ​ေ​ပါက်​ဖောက် ပြီး​တော့ 『eCool』ကို အသုံးပြု​ခြင်း​အား ဖြင်. ၁​၂ ရာသီ​ပတ် လုံး မီ​တာ​ခ​လဲ မ​ကျ​ဘဲ​နဲ့ ဘီ​ယာ အေးအေး လေး​ကို သောက်​နီုင်​မှာ​ပါ ။
LA မှ Peddler`s Creamery
ကလေး​ဘ၀​ကို ပြန်​ပြောင်း​အောက်မေ့​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ စက်ဘီး နဲ့ Ice-Cream ဟာ ကလေး​များ အနှစ်​သက်​ဆုံး​အရာ​များ​ထဲ​မှာ ပါဝင်​ပါ​တယ်။ အဆို​ပါ ကလေး များ​အကြိုက်​နဲ. စီးပွား ရေး​ကို ပေါင်း​စပ်​လိုက်​တော့ Peddler`s Creamery လို.ခေါ်​တဲ.စ​တိုင် အသစ် နဲ. စီးပွား​ရေး အသစ်​တ​မျိုး Los Angeles မြို့​လည်​ခေါင်​မှာပေါ်​ထွန်း​လာ​ပါ​တယ်။ သမာရိုး​ကျ Ice-Cream ဆိုင် များ​နဲ. မ​တူ တမူ ထူးခြား​တဲ့ စီးပွား​ရေး ကို တည်ထောင်​သူ​ကတော့ Baskin-Robbins မှာ အလုပ်​လုပ်​ပြီး Environmental Science ဘာသာ​ရပ်​နဲ့ ဘွဲ့ ရ​လာ​သူ Edward Belden ပါ။ သူ့​ရဲ့ ဆိုင် မှ အမျိုး​မျိုး …
ရင်​သပ်​ရှု​မော​ဖွယ် Body Art
phyo, Jun 9, 2014
အိုး! သူ့​ပါး​စပ် ကို ကြည့်ပါ ဦး။ အထက်ဖော်​ပြ​ပါ ရင်​သပ် ရှု​မော အံ့ဩ ရ​လောက်​သော အနု​ပညာ လက်ရာ​များ ကို​ဖန်တီး​သူ ကတော့ ဂျပန် ပြည်​မှ Body Art အနု​ပညာ​ရှင် Choo-San ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အများ​နဲ့​မ​တူ တဲ့ စိတ်ကူး​စိတ်​သမ်း များ​နဲ့ Acrylic ဆေး တို့ ထိ​တွေ့ ရာ​မှ တမူ​ထူးခြား​သော အနု​ပညာ​လက်ရာ​များ​ပေါက်ဖွား​လာ​ပါ​တော.တယ်။ ကောင်မလေးကျောက​ထွက်​လာ​တာ ဘယ်​သူ​ပါ​လိမ်. …….. ဒီခလုတ် ကို​နှိပ်​မှ ဒီ​ကောင် က အလုပ် လုပ်​မှာ နဲ့​တူ​တယ်။ ဓာတ်ခဲအားကုန် ပြီ​ဟေ. ။ Choo-San ရဲ့ လက် ရာ​များ …
phyo, Jun 6, 2014
ဟန်း(The hang)တူရိယာ​ဟာ ဆွစ်​ဇာ​လန်​နိုင်ငံ ဘန်း​မြို့​မှ Felix Rohner နှင့် Sabina Schärer တို့ တီထွင်​ခဲ့​သော ဂီ​တ​တူရိယာ​တစ်​မျိုး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဟန်း Drum လို.လည်းခေါ် ကြ​ပါ​တယ်။ စ​တီး အလွှာ ၂​ခု ကို UFO Shape ဖြစ်​အောင် စပ်​ထား​သော အခေါင်းပေါက် တူရိယာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အပေါ်​ထိပ် အလယ်​တည့်​တည့် မှာ Center နုတ် ရှိ​ပြီး​တော. ဘေး​ပတ်​ချာလည်​မှာ နုတ် ၇ ခု မှ ၈ ခု ရှိ​ပါ​တယ်။ တီး​ခတ်​ပုံ တီး​ခတ်​နည်း ဟန်း(The hang)တူရိယာ ကို​တီး​ခတ်​သူ​ဧ။်​ပေါင် ၂​ခု​ကြားမှာ ညှပ်​ပြီး လက်ချောင်း​လေး​များ​နဲ့ လက်ဖဝါး ကို …
Pepper (လူ​သား​များ​ရဲ့​ခံစား​မှု​ကို​နားလည် ပေး​နိုင်​သော စက်​ရုပ်)
ဂျပန်​ပြည်​မှ SoftBank အကြီးအကဲ Son Masayoshi က ၆​လ​ပိုင်း ၅​ရက် နေ.မှာ ကျင်းပ​သော စာ​နယ်​ဇင်း ရှင်းလင်း​ပွဲ မှာ လူ​လို​ခံစား​ပေး​နိုင်​သော စက်​ရုပ် （Pepper）ကို ကြော်​ြ​ငာ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ သမ​ရိုး​ကျ စက်​ရုပ် များ​နဲ့ မ​တူ​တဲ့​အချက်​က​တော. （Pepper）ဟာ လူ​သား​တွေ​ရဲ့ ခံစား​မှု​ကို နားလည်​နိင်​ခြင်း ပါ။ ၂​၀​၁​၅​ခု​နှစ်​၂​လ​ပိုင်း​မှ စတင်​ပြီ ရောင်းချ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ （Pepper）ရဲ့ ခန္ဓာ​ကိုယ် အတွင်း​မှာ လူ​လို​ခံစား​ပေး​နိုင်​သော Emotional အင်​ဂျင် လို.ခေါ်​တဲ. အဆင့်​မြင့် Artificial Intelligence ကို တပ်​ဆင် ထား​တာ​ပါ။ Feeling အင်​ဂျင်​ကို​အသုံးပြု​ခြင်း​အား​ဖြင့် လူ​သား​မျက်နှာ တွင်ပေါ်​လာ​သော​အမူ​အယာ​ကို ခွဲ​ချမ်း​စိတ်ဖြာ​မှတ်သား​နိုင်​ခြင်း ၊ အပြုအမူ(Behaviour)များ​ကို မိမိ …